Budata GSpace maka gam akporo [Cloning App] - Luso Gamer
Nbudata GSpace maka gam akporo [Cloning App]
Echiche nke cloning bịara mgbe ndị ọkachamara malitere iche echiche ime ọtụtụ ọrụ. Ọ bụ ezie na smartphone na-enye nke a dịgasị iche iche nke multi arụmọrụ. ma na-atụle ọrụ nke onye ọ bụla ngwa n'ọtụtụ oge anyị wetara GSpace Apk.
N'ezie, ngwá ọrụ a ma ama maka omume nke cloning ngwa. Agbanyeghị na ọ nweghị nhọrọ dị otú ahụ kpọmkwem nke cloning bụ nke a na-enweta n'ime smartphones. Iji mee ndị dị otú ahụ arụmọrụ, ọrụ na-chọrọ ka wụnye ndị ọzọ ngwaọrụ na mgbe ahụ na-enwe pro arụmọrụ.
Mgbe anyị na-enyocha ngwá ọrụ anyị hụrụ ọtụtụ atụmatụ na arụmọrụ dị iche iche n'ime. Anyị ga-atụle ndị isi ọrụ nkenke nzọụkwụ site nzọụkwụ n'okpuru ebe a. Yabụ ị nwere mmasị ma dị njikere ịnụ ụtọ njirimara pro n'efu wee wụnye Gspace App.
Kedu ihe bụ GSpace Apk
GSPACE Apk bụ ngwa gam akporo gam akporo nke ndị ọzọ na-akwado site na GSPACE. Ihe mere eji hazie ngwa a bụ iji nye ebe nchekwa. Ebe ndị ọrụ android nwere ike ịmepụta clones na-enweghị ngwụcha n'efu na-enweghị ndenye aha ọ bụla.
E wezụga cloning android ngwa, ngwá ọrụ na-ewu ewu n'etiti android gamers. Ọtụtụ n'ime ndị egwuregwu maara nke ọma gbasara machibido akaụntụ egwuregwu gbakwunyere ngwaọrụ. Ha na-achọkarị ikpo okwu echekwara n'ịntanetị.
Agbanyeghị, ọtụtụ ebe enwere ike ịnweta n'ịntanetị bụ nke adịchaghị. Nke na-akwado ma zere mmachibido iwu ma ọ bụ akaụntụ na ID. Ma ebe a mmepe ahaziri a ịrịba android ngwá ọrụ bụ free iji wụnye na-achọghị ndenye aha.
Ọzọkwa mwekota na Ngwa eji eme ihe ga-enyere aka na-ezobe isi ngwaọrụ nzere gụnyere IMEI na adreesị IP. N'ihi ya, izobe isi nọmba ga-egbochi sava ndị ahụ ị nweta nzere ziri ezi. Yabụ na ị hụrụ njirimara igodo n'anya wee wụnye GSpace Download.
Aha ngwugwu com.gspace.android
Usoro nke echichi na itinye n'ọrụ nke ngwa dị nnọọ mfe. Nke mbụ, a na-arịọ ndị ọrụ android ka ha budata ụdị faịlụ Apk kachasị ọhụrụ site na ebe a. Ozugbo nbudata nke ngwa ahụ zuru, ugbu a gaa na ngalaba nchekwa isi.
Wee chọta faịlụ Apk ebudatara wee bido usoro nrụnye. Ozugbo echichi nke ngwa zuru ezu, ugbu a gaa na mobile menu na ẹkedori arụnyere ngwá ọrụ. Ugbu a, hapụ ikike igodo ka ọ rụọ ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ndị ọrụ nwere ike ịhụ akara mgbakwunye a n'ime menu isi. Ugbu a pịa akara gbakwunyere isi wee tinye akara ngosi ngwa dị iche iche maka mbubata faịlụ. Ozugbo usoro cloning zuru ezu, ugbu a gaa na akara ngosi isi wee malite akara ngosi dị na ya.
Agbanyeghị na atụmatụ pro dị iche iche enwere ike iji. Ọbụna ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ bụ́ isi ka a na-arụ n'oge a na-ewu ma nwee ike iru ya n'ụbọchị ndị na-abịa. Enwere otu nsogbu ndị ọrụ nwere ike ịnwe mgbe ha na-eji ngwa ahụ.
Nsogbu ahụ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ. Mana cheta mgbasa ozi ndị ọzọ na-akwado bụ enyi na enyi na ekwentị ga-apụta na ihuenyo adịkarịghị. N'ihi ya, ị dịla njikere ịnụ ụtọ njirimara pro na ịdị njikere ịnụ ụtọ nhọrọ adịchaghị wee budata GSpace gam akporo.
Key Akụkụ nke Ngwá Ọrụ
Mfe iji wụnye.
Ịmekọrịta ngwá ọrụ na-enye nhọrọ pro dị iche iche.
Ndị ahụ gụnyere Cloning na Multi Operations.
Ma ga-egosi na ihuenyo obere.
Ngwa ngwa bụ enyi na enyi.
Otu esi ebudata GSpace Apk
N'oge na-adịbeghị anya enwere ike ịnweta ngwá ọrụ a site na Ụlọ Ahịa Play. Mana n'ihi ụfọdụ isi okwu, ngwa a agaghị enwe ike ịnweta site n'ebe ahụ. Yabụ kedu ihe ndị ọrụ android kwesịrị ime n'ọnọdụ dị otú a mgbe ha enweghị ike ịnweta ngwa ngwa ahụ?
N'ihi ya, ị na-enwe mgbagwoju anya ma ị maghị onye ị ga-atụkwasị obi ga-aga na webụsaịtị anyị. N'ihi na ebe a na webụsaịtị anyị, anyị na-enye naanị ezigbo faịlụ Apk mbụ. Iji jide n'aka na nchekwa na nzuzo nke onye ọrụ, anyị wụnye Apk n'elu ngwaọrụ dị iche iche tupu ịnye ya n'ime ngalaba nbudata.
Ngwa ngwa anyị na-enye ebe a maka ndị ọrụ android bụ nke mbụ. Ọbụna ịnweta atụmatụ ngwa ngwa anaghị achọ ndenye aha ma ọ bụ ndebanye aha. N'ihi ya, ngwá ọrụ ahụ dị ka ọ dị ọcha ma dị nchebe iji wụnye n'ime smartphones.
Anyị ebipụtalarị ma kesaa ngwa ọrụ cloning ndị ọzọ yiri ya na nke ngwa a. N'ihi ya, iji nyochaa ngwa ndị ọzọ nwere ike ịnweta, biko pịa njikọ ndị a. Ndị ahụ bụ VPhoneGAGA ngwa na TP Virtual ngwa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwá ọrụ na-enyere android ọrụ na-enwe mmasị na-eke na-akparaghị ókè ngwa clones maka free. Mgbe ahụ na nke a, anyị na-akwado ndị android ọrụ download na wụnye Gspace Apk. Nke ahụ bụ n'efu ibudata na ịnweta site na webụsaịtị anyị site na iji otu pịa nhọrọ.
Categories Ngwaọrụ, Apps Tags Ngwa eji eme ihe, Gspace gam akporo, GSpace Apk, Ngwa Gspace, Nbudata GSpace Mail igodo
Nbudata ọkwa ọkwa mkpanaaka Legends maka gam akporo [Ngwaọrụ ML]
Otutu Play Apk Download Maka gam akporo [IPTV's]